SIDA LOO RAKIBO MUSQULAHA MARAWAXADA IYAGA OO GACMAHOODA KU LEH. TALAABO TALLAABO TALLAABO AH OO LAGU RAKIBAYO QAANSHEEGTA IYO DHIMISTA QOLOFKA BIRTA IYO ALAABADA MACMALKA - SAMEE NAFTAADA
Marka ugu horeysa, waxay u muuqataa in rakibida tuubbada aysan aheyn mid adag: wuxuu ku daboolay wareegyada loo baahan yahay ee daloolka shaqada, ka gooyo, galiso tuubada, waxay ku xiran tahay bulaacadaha iyo tuubooyinka tuubada, oo dhanna - waad isticmaali kartaa. Dhab ahaantii, habka dhabta ah waa, marka laga reebo hal "laakiin." Ninkan lagu rakibay dabka ayaa si fiican u muuqan doona wuxuuna u adeegi doonaa si sax ah, wakhti dheer oo aan dhibaato lahayn oo leh qalab tayo sare leh oo raacaya farsamooyinka adag iyo farsamada. Halkaan waxaa laga yaabaa in aad sameyso dadaal, inkastoo mulkiilaha guriga oo aan xad-dhaaf ahayn.
Si aad u rakibto qalabka wax lagu dhaqo, waa inaad:
Boobka leh disk ah ee lagu jarayo xeelad haddii ay tahay inaad la shaqeyso dhagax macmal ah;
Qaadashada, kuwaas oo inta badan la keeno makhaayadda.
Ma taqaanaa? Dajiyaasha qaabka tuubooyinka, oo la mid ah kuwa casriga ah, waxay u jirtey horaantii 1700 BC ee dhulka Suuriya maanta.
Ku dhaq Qawaaniinta Ku-xirnaanta
Marka la eego xeerarka ergonomics, kuwaas oo sii kordhaya nolosheena, sii-daynta alaabta iyo qalabka jikada waa in ay u hoggaansamaan shuruudaha cad, sida ugu caansan ee loo yaqaan "xeerka dahabka ee saddex-geesoodka ah", kaas oo mamnuucaya rakibidda foornada meel u dhow foornada iyo qaboojiyaha.
Hagaajinta dayactirka, waa faa'iido leh inaad baratid sida loo xoqdo waraaqaha derbiga, sida loo sameeyo tuubo guri khaas ah, sida loo xiro, sida loo sameeyo qaybta dusha sare ee albaabka, sida loo dhigo nalka iftiinka, sida loo xiro kululeeyaha biyaha kulul, iyo sida loo xiro derbiyada dusha sare.
Waa saxan tahay in saxanka jikada lagu dhejiyo meel u dhow goobta shaqada meesha nadiifinta iyo jarista cuntada. Masaafada u dhexeysa qaboojiyaha ilaa weelka iyo saabuunta ilaa karbaba waa inay ahaataa ugu yaraan 40 sentimitir dhinac kasta. Waqti dheer maahan, marka qalab rakibidda ay sabab u tahay isku xirka adag ee bullaacadda, biyaha, gaaska, dhuumaha korontada iyo hawo-gelinta, shuruudaha ergonomic ah ee naftooda ayaa ka soo dhex muuqday. Maanta, badi qalabka cusub iyo qalabka cusubi waxay ka dhigeysaa midkabadan adkeysiga ah oo gaabis ah oo dhamaystiran.
Ilaa hadda, waxaa jira saddex nooc oo ugu caansan ee qalabka wax lagu dhaqo, taas oo ka duwan midba midka kale ee qaababka naqshadeynta ee rakibaadda: kore, dhimasho iyo mashiinka. Ku rakibidda nooc kasta oo dejiye ah wuxuu u baahan yahay hab gaar ah iyo inta badan kiis walba.
Ma taqaanaa? Naqshadayaasha hal-abuurka ah ee beerta tuubada ayaa loo maleynayaa inay abuuri karto tuubo ku taal aquarium leh kalluunka nool. Nashqadiisu waa sida in xitaa biyaha kulul ku shubaya tuubada aysan waxyeello u geysan kalluunka.
Ku rakibida derbi derbi
Noocyada nooca jikada ayaa ah kuwa ugu dhaqaalaha badan miisaaniyadda qoyska waana sahal in la rakibo. Xaaladdan oo kale, tuwadha ayaa si fudud loo geliyaa qaybta qalabka dhismaha ee ah qaabka looxaan ama wasiir gaar ah, iyada oo natiijada ka soo baxda saxanka la bedelo miiska sare. Dhibaatooyinka noocan oo kale ah ee tuwaaliddu waxa ka mid ah meel bannaan oo u dhaxaysa isaga iyo miiska jikada jikada ee ku dhow.
Video: rakibidda (rakibidda) makhaayadda jikada
Diyaarinta dusha sare
Dhab ahaantii, diyaarinta dusha sare ee golaha wasiirada ama goluhu maaha mid gaar ah lagama maarmaanka u ah maqnaanshihiisa. Waxaan leenahay albaab furan oo ku xiran darbiyada golaha wasiirada. Derbiyadan ka soo baxa gudaha iyagoo gacan ka helaya dhejisyada gaarka ah ee L-qaabeeya, badanaa waxaa ku jira baakadka, iyo calaamad u calaamad u ah iskudhafka isku dhejinta.
Rinjiga hore ka saar darafyada qalabka kala duwan.
Ka dibna naqaska, 15 mm dheer, waxaa lagu dhejiyaa derbiyada faraha ka soo baxa godadka ku yaal xayndaabyada xajinta si ay ugu yaraan 5 mm u dhexeeyaan madaxooda iyo derbiyada.
Ku rakibida baabuurka
Taas ka dib waxay soo noqotaa gelitaanka qalabka degdegga ah ee qalabka nadaafadda. Laakiin horaantii, dhammaadka golaha wasiirrada waa in lagu daaweeyaa shaabbadeeyaha si ay uga soocaan qoyaanka iyo hagaajinta dheeriga ah ee wasaaradda.
Waa muhiim! Si loo fududeeyo geeddi-socodka isku-xidhka nadiifinta biyaha, qalabkana waa in lagu hagaajiyaa ka hor inta aanad ku rakibin.
Ka dibna qolofka ayaa lagu dhejiyaa golaha wasaqda iyo adkee nalka garka illaa inta ay si ammaan ah ugu xiran tahay dhejiyeyaasha.
Kadib markaad ka saarto shubka xad-dhaafka ah, waxaad ku xiri kartaa saabuunta biyaha iyo bulaacadda. Si arrintan loo sameeyo, qasacaduna waxay ku xiran tahay tuubooyinka dabacsan ee biyaha kulul iyo qabow waxay ku xiran yihiin giraanta biyaha. Siphon waxaa lagu rakibay saabuun horay loo rakibay oo wuxuu ku xiran yahay nidaamka bullaacadaha iyadoo la adeegsanayo sgon-kareen.
Samee daaqadaha daaqadaha jiilaalka.
Ku rakibida rakibidda tuubbada
Qalabka noocan ah waxaa lagula talinayaa in lagu rakibo haddii alaabta jikada ay ku taallan tahay isla shaqadaas, oo aan laga soo ururin qaybo gooni ah. Mortise noocan oo kale ah waxay ku haboon tahay soo-saarista miisaanka caadiga ah waxayna bixisaa xakameyn sare, laakiin rakibidda waa waqti badan. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in si sax ah loo saxo oo loo saxo godka daloolka. Ka hor inta aanad ku rakibin tuubada, waa inaad hubisaa joogitaanka xirmo gaar ah iyo shaanadda tuubbada ee xirmada. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la diyaariyo qalabka qaabka:
mashiinno bir ah oo leh 10 mitir matag ah;
shukumaan aan silicoon lahayn;
Bilowga, waxaa lagula talinayaa goobta xajmiga ah ee qolofta loo maleynayo in la geliyo, si loo go'aamiyo meesha ay ka baxayso qulqulka mustaqbalka oo ku calaamadee labo qalin oo qalin ah. Kadibna, sii wad si aad u dejiso saxanka, iyada oo loo marayo daloolka godka ee aad u baahan tahay si aad u hesho miiska miiska sare ee isgoysyada horay loo daabacay xariiqda dareenka iyo si muuqata u habeeya bartamaha daloolka godka.
Baro sida loo sameeyo meel indhoole ah oo leh gacmahaaga, ka saar cirbadda ka soo saarka dabka, ku dheji xayawaanka godadka ah ee waddanka, u diyaari beerta hore si quruxsan, oo xaji foornada xayndaab ee xagaaga xagaaga.
Kadib, adoo isku dhejinaya cidhifyada sare iyo kan hoose ee maskaxda si siman u jeeda meelo fog oo ku dhow xudduudaha, waxaad u baahan tahay inaad sawirto qalin ku wareegsan xuduudda godka. Ka dib markaa, cabbir dhererka dhudhunka dhinaca iyo, gudaha gudaha kuxiran ee shaqada miisaanka, cabirta xuduudaha daloolka mustaqbalka leh caawinta qiyaasta qalabka iyo qalin. Baaxadda dhinaca dhinac ah waxay ku kala duwan tahay noocyada kala duwan ee qalabka jikada, laakiin inta badan waa 12 mm.
Video: Ku rakibida musqusha dushiisa jikada
Ka hor intaadan jarjarin jaranjaro yar oo ku dul qoran miiska korkiisa, isticmaal dharka si aad u qodo godadka meelaha hoose ee fududeeya geedi socodka jarida. Kadib, adoo isticmaalaya jigsaw, waa mid aad u fiican oo lagu gooyo daloolka, inuu ku dhejiyo bareeyayaasha meelo badan oo ka mid ah booska, si ay qayb uga noqoto kumbuyuutarka uusan burburin dhammaadka geedi socodka.
Waa muhiim! Hawlgalkani waa in si taxadar leh loo qabtaa, tan iyo marka laga eego, hal gacan, tuwaalku waa inuu godka si xor ah u galaa, dhanka kalena, dhabta dhabta ah ee calaamadaynta waxay noqon kartaa ugu badnaan 3 mm.
Markaad dhamaysato inaad la shaqayso jajab, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto nalka iyo ka dibna qaybta la gooyey, ka dib markaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga saartid boodhka laga gooyo boodhka isla markaana gali godka meesha godka ka soo baxa si aad u hubiso in mashiinka godka fiican yahay.
Cutub aan la daweynin inta lagu gudo jiro xaaladaha qoyaan badan ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo burbur iyo isbeddelka dambe, taas oo keeni doonta dhibaatooyin xasillooni xasillooni ah. Sidaa daraadeed, gooyo, bilaash boodhka, lagu nadiifiyo waraaqaha emerka kadibna lagu daboolo shubanka fayadhowrka. Waad ilaalin kartaa jarjarada adigoo isticmaalaya faashadda PVA, laakiin waa inay sugto ilaa hal saac illaa qalinka si fiican u qalajin karo.
Taas ka dib, waa lagama maarmaan in la dhejiyo shaabbadeeyaha, oo ay weheliso tuubada, wareegga wareegga dhinaca sagxadda. Si arrintan loo sameeyo, waa in marka hore la gooyaa qalabka qaar. Dabadeed shaabbadeeyaa waxaa lagu daboolaa lakab khafiif ah oo la riixay dhinaca dhinaceeda. Lakabka lafdhaasiga ah waxaa lagu daboolayaa kiniiniyada farqiga u dhaxeeya duleedka dibadda iyo khadka jarista.
Ku rakib habka qaboojiyaha guriga.
Iyo gudaha, waa lagama maarmaan in la rakibo dhejiyeyaasha meelaha geesaha lagu dhaqo oo aan si buuxda u goyn. Kani waxaa raacaya rakibida tuubada, kaas oo u baahan in laga bilaabo dhinaca miisaanka, ka dibna aan lahayn cillad, waa lagama maarmaan in la sii wado daloolka godka illaa iyo xiriirka ugu muhiimsan miiska sare. U hubso inaad isticmaasho heerka sida rakibidda, waa in aad ugu dambeyntii hagaajiso xajiyaha. Haddii shaabbadeeye dheecaan ah laga tirtiro qaybaha qalabka jikada ee la rakibay, waa in laga saaraa waqti isku mid ah oo la socdo calaamadihii lagu daboolay budada. Qiyaastii hal maalin kadib, marka silikoontu ugu dambeyntii dhuujiso, tuugada ayaa diyaar u ah isticmaalka.
Dadaal si aad u qurxin karto meel ku dhow guriga, u fiirso suurtagalnimada samaynta dhir, alpine slide, isha, xayndaabka cawska, sariirta ubaxa, trellis, beerta sariiro, mixborder, qulqulka qallalan.
Isku darka, oo ay la socdaan tuubooyinka ku dhajiyay, waxaa lagu rakibi karaa tuubada isla markiiba ka hor inta aan lagu rakibin shaqada shaqada, ama ka dib. Daboolka biyaha kulul iyo qaboojiyaha waa in lagu xiraa tuubooyinka ku haboon ee nidaamka tuubada ka dibna hubi xakamaynta xidhiidhka. Sifada waa in lagu dhajiyaa godka godka laga xiro oo ku xiran bullaacadaha iyada oo loo marayo tuubo olol ah.
Rakibaad gaar ah oo lagu dhejiyo dhagaxyo macmal ah
Badanaa, miisaanka sunta ah ee macmalka ah ayaa la bixiyaa marka la codsado iyada oo la furay furitaanno nooc gaar ah oo loo yaqaan 'lavish'. Haddii aysan taasi dhicin, markaas daloolka waa in la gooyaa sawirka aadka u sareeya ee kor lagu sharaxay, kaliya halkii uu ka noqon lahaa jigsaw, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho tuugta wax lagu qalabeeyo oo la shaqeynayo la taaban karo. Iyadoo khibrada qaarkood, qalab iyo alaabooyin ku habboon, iyo sidoo kale si taxadar leh u raacaya tilmaamaha naqshadeynta guryaha, waa suurtagal in la rakibo baabuurka oo aanad ku xirnayn adiga oo aan ku lug lahayn xirfadlayaal qaali ah.
Video: sida loo rakibo saxanka
Teknoloojiyadu waa mid aad u fudud Wink A sawn ayaa la nadiifiyaa iyada oo burush laga bilaabo balka iyo boodhka. Iyada oo laga caawinayo sirinjeer-bistoolad ama habab loo hagaajiyay (darbi, iwm.), Silicone ayaa laga tirtirayaa kartridgeerka waxana lagu daboolay dusha sare ee biraha. Kadibna waxaa si fudud loogu fiiqi karaa farta qoryaha, oo leh khafiif, xitaa lakab. Farta waxaa lagu tirtiraa xaashida ama warqad kale oo ku habboon. Dhaqdhaqaaqu waxay noqon doontaa mid culus, mana ku dhajin meel kasta. Waxaad ku ridi kartaa silikoon (nadaafad), iyada oo aan dhicin.
Waa lagama maarmaan in la gooyo miiska sare ee lagu dhaqo birta birta ah.
Foomka jimicsiga BOSCH T101B wuxuu leeyahay iliga dambe, iida, ilkuhu waxay u jeedaan jilbaha. Maxay tahay habka ugu wanaagsan ee looga gooyo cutubka - si ay jigsawe u ahaato dhinaca lakabka lakabka ee xajmiga, mise waa ay ka fiicantahay in leexiyo mishiinka oo ka gooyo dhinaca dambe? Shukriumka silikiconku waa inuu noqdaa dhexdhexaad Waad ku mahadsan tahay.